Ilhan Cumar oo ku baaqday in cunoqabatayn lagu soo rogo Dhaxalsugaha Sacudi Carabiya - Home somali news leader
Home NEWS Ilhan Cumar oo ku baaqday in cunoqabatayn lagu soo rogo Dhaxalsugaha Sacudi...
Ilhaan Cumar oo ka tirsan xildhibaannada Aqalka Kongreeska (Congress) dalka Mareykanka ayaa ku baaqday in Maraykanku ay u cunaqabateyn ku soo dhaxalsugaha Boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed Bin Salman.
Baaqa Ilhaan Cumar ayaa imanaya kaddib markii qoraal ka soo baxay Sirdoonka Mareykanka lagu sheegay in Maxamed Bin Salmaan uu bixiyay amarka lagu dilay Wariye Jamaal Khaashuuqi.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa iska diiday eedeyntan ugu timid Sirdoonka dalka Mareykanka ee ka dhanka ah dilka Wariye Khaashuuqi oo lagu dhax dilay safaaradda Sacuudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018kii.
Bayaan ay soo saartay Ilhan Cumar ayaa waxaa lagu sheegay;
“Tani waa sheeko dheer oo dhab ah oo soo daahday oo ku saabsan naxariis darada iyo sharci la’aanta kaligii taliyihii Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan. Wixii horeyba u muuqday hada waa mid aan la cadeyn karin: MBS iyo maamulka Sacuudiga ayaa si toos ah masuul uga ah dilka saxafiga Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi waana in lala xisaabtamo.”
“Waa nabar madow oo damiirka ummaddeena ah in kii hore”Trump” ee deganaa Aqalka Cad uusan kaliya la shaqeyn oo maalgelin siinin dowladda Sacuudi Carabiya-laakiin wuxuu ku faanay inuu daboolayo dilka Mr. Khasshogi. Laakiin musuqmaasuqu wuu sii qoto dheer yahay. Muddo tobanaan sano ah, Mareykanku wuxuu indhaha ka qarsaday cabudhinta Sucuudiga ee haweeneyda, taageerada addoonsiga casriga ah, xarigga dadka u dooda xuquuqda aadanaha, iyo ku lug lahaanshaha weerarkii argagixiso ee ugu xumaa ee ka dhaca dhulka Mareykanka taariikhda, Sebtember 11. Waxaan u oggolaaneynaa ujeeddooyinkeenna boqortooyo, ku tiirsanaanta shidaalka shidaalka iyo maskaxdii Dagaalkii Qaboobaa inay xushmeeyaan xushmadda aasaasiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo danaheenna qaran ee dhabta ah.”
“Maanta waa isbedel weyn oo ku yimid siyaasadeena ku wajahan Sacuudiga. Waxaan ku faraxsanahay in Aqalka Cad uu qiray dambigan, marka lagu daro joojinta taageerada dambiyada Sacuudiga ee ka dhanka ah aadanaha ee Yemen.”ayay sii raacisay.
“Mareykanku waa inuu si joogto ah ugu istaagaa xuquuqda aadanaha iyo sharafta aadanaha adduunka oo dhan – ma ahan oo keliya markay ku habboon tahay.”
Warbixin laga soo saaray Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in Dhaxalsugaha Boqortoyada Sacudi Carabiya Maxamed Bin Salman uu ansixiyay dilki saxafigii Jamal Khashoggi oo lagu diley dalka Turkiga sanadkii 2018.
Previous articleSchool children abducted in the Nigerian state of Niger 10 days ago were released, the governor said
Next articleMadaxweynaha Puntland Deni oo ka hadlay weriye u xiran maamulkiisa